अन्तत ग्रिजमन बार्सिलोनामा अनुबन्ध, नेइमारकाे सम्भावना सकियो ! - Maxon Khabar
Home / Sports / अन्तत ग्रिजमन बार्सिलोनामा अनुबन्ध, नेइमारकाे सम्भावना सकियो !
अन्तत ग्रिजमन बार्सिलोनामा अनुबन्ध, नेइमारकाे सम्भावना सकियो !
स्पेनिस महहारथी बार्सिलोनाले एट्लेटिको मड्रिडबाट २८ वर्षे एन्टोइन ग्रिजमनलाई अनुबन्ध गरेको छ । बार्सिलोनाले ग्रिजमनलाई 108 मिलियन पाउण्डमा अनुबन्ध गरेको हो । बार्सिलोनासँग ग्रिजमनलाई पाँच वर्षको सम्झौता गरेको बताइएको छ ।
ग्रिजमनले विश्वका उत्कृष्ट खेलाडीको जमघट रहेको बार्सिलोनामा लियोनल मेस्सी र लुइस स्वारेजसँग आफ्नो क्षमता देखाउनुपर्नेछ ।
दुई सिजनदेखि क्लबमा भित्र्याउने तरखर गरे पनि सफल नभएको बार्सिलोनाले अन्ततः ग्रिजमनलाई महंगो रकममा अनुबन्ध गरेको छ । हाल स्पेनको इबिजामा छुट्टि मनाइरहेका उनले जसमा उनले सात सय १७ मिलियन पाउण्ड रकम पाउनेछन ।
बार्सिलोनामा गएकाे सिजन पनि अनुबन्धका लागि निकै नजिक पुगेर अन्तिममा बार्साको योजना फेल भएको थियो । ग्रिजमनलाई भित्र्याएपछि अब अर्का स्टार खेलाडी नेइमार क्याम्प नोउ फर्किने सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ । ब्राजिलका खेलाडी नेइमार पछिल्लो पटक बार्सिलोना फर्कने भन्दै निकै चर्चा भएको थियो ।